Real Madrid Oo dooneysa Donnarumma | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Real Madrid Oo dooneysa Donnarumma
Real Madrid Oo dooneysa Donnarumma
Posted by: radio himilo September 4, 2016
Sida ay tilmaameyso majaladda SPORT ee gobolka Catalonia kooxda Real Madrid ayaa isha ku heysa iney lasoo saxixiato goolhayaha da’da yar ee kooxda Milan Gianluigi Donnarumma.
17-jirkaan heerka caalami ayaa ku guuleystay inuu noqdo goolhayaha koowaad ee kooxda Milan isagoo aad u da’yar sidoo kalana wuxuu noqday ciyaariyahankii ugu da’da yaraa ee xulka Azzurri garoon u gala tan iyo sanadkii 1911-kii markii uu kaulankiisii ugu horeeyay isbuucii lasoo dhaafay ka hortagay France.
Wargeyskaan laga leeyahay Spain ayaa aaminsan in madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez uu taageero weyn u yahay goolhayahaan da’da yar ee ay magaca wadaagaan halyeyga Italy iyo Juventus [Gianluigi] Buffon’.
Dhanka kalana Zidnedine Zidane ayaa doonaya inuu dooqa labaad ee kooxda Real Madrid dhanka goolka ka dhigo wiilkiisa 18-jirka ah ee Luca Zidane, halka Perez uu isha ku haayo inuu Donnarummaa keeno caasimadda Spain.
Previous: Sergio Aguero oo La ganaaxay
Next: Sadio Mane oo Laga yaabo in uu kasoo hormaro Soo laabashadii la filaayay.